महिलाले आफू भन्दा बढी उमेरको पुरुष किन खोज्छन ? जान्नुहोस « Sudoor Aaja
१७ श्रावण २०७७, शनिबार २२:१७
महिलाले आफू भन्दा बढी उमेरको पुरुष किन खोज्छन ? जान्नुहोस
सुदूर आज १७ श्रावण २०७७, शनिबार २२:१७
हामीले समाजमा हेर्यौंन भने अधिकाँश जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपपाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका नै हुन्छन् । यस्तो किन हुन्छ होला । खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला खोजेर यस्तो भएको होइन बरु महिलाहरु नै आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । यहाँ महिलाले बढी उमेरको पुरुष खोज्ने कारणको चर्चा गरिएको छ ।